Hans - デンマーク語 - ビルマ語 翻訳と例
検索ワード: hans (デンマーク語 - ビルマ語)
Og de kom hans Ord i Hu.
မနာရှေသား အာမုန်၊ အာမုန်သား ယောရှိ တည်း။
ပြော၍မကုန်နိုင်သော ဘုရားသခင်၏ ဆုကျေးဇူးတော်ကို အောက်မေ့၍ ချီးမွမ်းခြင်းရှိစေသတည်း။
og hans Brødre, 928 dygtige Krigere.
သုနောက်၊ ဂဗ္ဗဲနှင့်သလ္လဲ အစရှိသော ကိုးရာ နှစ်ဆယ်ရှစ်ယောက်တည်း။
Thi heller ikke hans Brødre troede på ham.
အဟိတုပ်သားဇာဒုတ်၊ ဇာဒုတ်သားအဟိမတ် တည်း။
သင်သည် အလွန်ပျက်စီးပြီတကား။ ဧသော သည် အလွန်အစစ်ခံရပြီတကား။ သူဝှက်ထားသော ဥစ္စာ ကို အလွန်ရှာဖွေကြသည်တကား။
အခြားသောသူအများတို့သည် နှုတ်ကပတ်စကားတော်ကြောင့် ယုံကြည်၍၊
ကိုယ်အိမ်သူအိမ်သားတို့သည်လည်း ကိုယ်ရန်သူ ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။
အကျဉ်းခံရသော ယေခေါနိသားကား ရှာလ သေလ၊
ခါနာန်သား အကြီးကား၊ ဇိဒုန်။ ထိုနောက် ဟေသ။
ဘုရားသခင်သည် လူအသီးသီးတို့အား မိမိတို့ အကျင့်နှင့် အလျောက်အကျိုးအပြစ်ကို ဆပ်ပေးတော် မူလတံ့၊
ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့ကိုလည်း ထိုပွဲသို့ ခေါ်ပင့်ကြ၏။
Kana'an avlede Zidon, hans førstefødte, og Het,
ခါနာန်သားအကြီးကား ဇိဒုန်၊ ထိုနောက်ဟေသ၊
og de øvrige grebe hans Tjenere, forhånede og ihjelsloge dem.
ကြွင်းသောသူတို့သည်လည်း လုလင်တို့ကိုဘမ်းဆီး၍ ညှဉ်းဆဲခြင်း၊ အသေသတ်ခြင်းကို ပြုကြ၏။
Attrå ikke hans lækre Retter, thi det er svigefuld kost.
ထိုမင်း၏ခဲဘွယ်စားဘွယ်တို့ကို အလိုမရှိနှင့်။ လှည့်စားတတ်သောအစာဖြစ်၏။
Israel sige: "Thi hans miskundhed varer evindelig!"
ကရုဏာတော် အစဉ်အမြဲတည်သည်ဟု ဣသ ရေလအမျိုး ဝန်ခံစေ။
maana ya risk kwa kiswahili (英語>スワヒリ語)teže (セルビア語>ヘブライ語)sabun mandi (マレー語>簡体字中国語)be you the world will adjust (英語>ヒンズー語)frontliner (英語>マレー語)проворным (ロシア語>ラテン語)yokai desu (日本語>英語)tu et une salope (フランス語>英語)nakainum (セブアノ語>タガログ語)chiffoné (フランス語>英語)contoh karangan thaipusam thirunal (マレー語>タミル語)serokonverterede (デンマーク語>英語)mengenakanmu (マレー語>英語)don't be mean (英語>タガログ語)controllagli (イタリア語>オランダ語)sinoniem vir gestaak (アフリカーンス語>英語)对国家有贡献的人 (簡体字中国語>マレー語)non resident indian meaning in tamil (英語>タミル語)mencincang (マレー語>簡体字中国語)tamil pulambal meaning in english (タミル語>英語)উম্মে (ベンガル語>アラビア語)当局害怕它会引发社会暴动 (簡体字中国語>ベトナム語)palm (英語>イタリア語)taong panuruan (英語>タガログ語)vertretungsvereinbarungen (ドイツ語>スウェーデン語)